Zvemutemo Ziviso ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Chiziviso chepamutemo nemamiriro ekushandiswa
Gwaro rakaongororwa pa25 / 03 / 2018
Zvichienderana neMutemo 34/2002, waChikunguru 11, pamasevhisi enhau yeruzivo nekutengesa zvemagetsi, inokuzivisa iwe: • Zita rekambani ndere: Online Servicios Telemáticos SL • CIF / NIF B19677095 • Hofisi yakanyoreswa iri kuC / Blas de Otero º16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) • Zvekudyidzana ndezvekuti: Webhu inozivikanwa mune dzakasiyana nzira dzekutengesa pamhepo.
Chinangwa chewebsite ino
• Ipa zvemukati zvine chekuita neInternet Kushambadzira chiitiko. Chengetedza rondedzero yevanyoreri veblog uye zvirevo zvine mwero Chengetedza zvirimo uye makomendi emasevhisi anopiwa. • Chengetedza network yehukama hwakabatana. • Shambadzira wega uye wechitatu bato masevhisi.
Paunenge uchishandisa iyo androidpop.com webhusaiti, Mushandisi anobvuma kusaita chero hunhu hunogona kukuvadza mufananidzo, zvido uye kodzero dze androidpop.com kana wechitatu mapato kana izvo zvinogona kukuvadza, kuremadza kana kuwandisa iyo androidpop webhusaiti. Com kana izvo zvaizodzivirira , mune chero nzira, iko kwakajairika kushandiswa kwewebhu. androidpop.com inotora zvine mutsindo zvakakwana matanho ekuchengetedza kuti aone kuvepo kwehutachiona. Zvisinei, Mushandisi anofanira kuziva kuti matanho ekuchengetedza emakomputa paInternet haana kuvimbika zvachose uye, nekudaro, androidpop.com haigone kuvimbisa kusavapo kwemavhairasi kana zvimwe zvinhu zvinogona kukonzera shanduko mumasystem emakomputa. ) reMushandisi kana mune zvinyorwa zvavo zvemagetsi uye mafaera arimo. Chero zvazvingaitika, zvinorambidzwa kune VASHANDI (iyo PORTAL kudzima zvirimo uye makomendi aanoona zvakakodzera) kuita hunhu hunosanganisira: • Kuchengeta, kutsikisa uye / kana kutumira data, zvinyorwa, mifananidzo, mafaera, zvinongedzo, software kana zvimwewo. zvinogumbura zvinoenderana nezvinodiwa zviri pamutemo, kana kuti sekufungidzira kweapopp.com kuve zvisiri pamutemo, zvine chisimba, kutyisidzira, kushungurudza, kusvibisa, kusvibisa, kusvibisa, rusaruraganda, kuvenga vekunze kana zvimwe zvinopesana kana zvisiri pamutemo kana izvo zvinogona kukuvadza chero mhando, kunyanya zvinonyadzisira.
Sewe mushandisi, iwe unoudzwa kuti kupinda kune ino webhusaiti hazvireve, munzira ipi neipi, kutanga kwehukama hwebhizinesi neInternet Servicios Telemáticos SL nenzira iyi, mushandisi anobvuma kushandisa webhusaiti, masevhisi ayo nezviri mukati pasina kutyora ikozvino mutemo, kutendeka kwakanaka uye kurongeka kwevanhu. Iko kushandiswa kwewebhusaiti yezvinangwa zvisiri pamutemo kana zvinokuvadza, kana izvo, neimwe nzira, zvinogona kukuvadza kana kukanganisa kushanda kwese kwewebhu kunorambidzwa. Nezve zviri mukati mewebsite ino, zvinorambidzwa: • Kuburitswa kwayo, kugoverwa kana kushandurwa, izere kana chikamu, kunze kwekunge uine mvumo yevaridzi vayo zviri pamutemo; Kupi nekutyorwa kwekodzero dzeanopa kana evaridzi chaivo; • Kushandiswa kwayo kwekushambadzira kana kushambadzira.
Dziviriro yedata uye Chengetedzo Yakavanzika
Mushandisi anogona kurovedza muviri, zvine chekuita nedatha yakaunganidzwa, kodzero dzinozivikanwa muOrganic Mutemo 15/1999, yekuwana, kugadzirisa kana kudzima kwedata uye kupikisa. Kuti ushandise kodzero idzi, mushandisi anofanira kunyora uye kusaina chikumbiro chavanogona kutumira, pamwechete nekopikopi yeID yavo kana gwaro rekuzivisa rakaenzana, kukero yepositi yeInternet Servicios Telemáticos SL (kureva, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)) kana neemail, yakanamatira kopi yeDNI ku: info (at) contact.online. Pamberi pemazuva gumi, chikumbiro chichapindurwa kuratidza kusimbiswa kwekodzero yawakakumbira kushandisa.
Pamhepo Servicios Telemáticos SL inozivisa kuti kune mafomu ekunyunyuta anowanikwa kune vashandisi nevatengi. Mushandisi anogona kutora zvikumbiro nekukumbira fomu yavo yekukumbira kana nekutumira email kuinfo (pa) contact.online inoratidza zita rako nesurname, sevhisi kana chigadzirwa chakatengwa uye uchitaura zvikonzero zvekuda kwako. Iwe unogona zvakare kunongedza chikumbiro chako neposvo tsamba ku: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) uchishandisa, kana uchida, fomu yekutsvaga inotevera: Tarisa: Online Servicios Telemáticos SL C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) E-mail: info (pa) contact.online • Zita remushandisi: • Kero yemushandisi: • Siginecha yemushandisi (chete kana ichitaridzwa pabepa): • Zuva: • Chikonzero chekuda:
Kubudikidza neMaitiro Akawanda, hapana huchenjeri kana kodzero yezvivakwa zvemabhizimusi inoendeswa kune iyo adminpop.com webhusaiti, hune hungwaru hupfumi ndehwe Online Servicios Telemáticos SL, Mushandisi ari kurambidzwa zvakajeka kubereka, shanduko, kugovera, kutaurirana neruzhinji, kunoitwa kuti iwanikwe kuruzhinji. ., kubvisa, kushandisazve, kuendesa mberi kana kushandisa chero hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi? Mushandisi anoziva uye anotambira kuti iyo webhusaiti yese, iine isina hunhu hwakakwana zvinyorwa, software, zvirimo (kusanganisira chimiro, kusarudzwa, kurongedzwa uye kuratidzwa zvakafanana), mifananidzo, zvinhu zvekuona uye zvekubika uye mabikirwo, inodzivirirwa nezviratidzo, copyright uye zvimwe zviri pamutemo kodzero dzakanyoreswa, zvinoenderana nezvibvumirano zvepasirese kune iyo Spain bato uye dzimwe kodzero dzepfuma nemitemo yeSpain. Muchiitiko chekuti mushandisi kana wechitatu anofunga kuti kwave nekutyorwa kwekodzero dzavo dzepamutemo dzepfuma nekuda kwekuunzwa kwezvimwe zvirimo paWebhu, vanofanirwa kuzivisa mamiriro ezvinhu kuInternet Servicios Telemáticos SL inoratidza: uyo anofarira ane kodzero dzinofungidzirwa kuti dzakatyorwa, kana kuratidza chinomiririra chaanoshanda nacho kuitira kuti chikumbiro chacho chipiwe nemumwe munhu asiri munhu anofarira. Ratidza zvirimo zvakachengetedzwa nekodzero yezvivakwa nenzvimbo yavo paWebhu, kubvumidzwa kwekodzero dzehungwaru dzakaratidzirwa uye kuzivisa kuri pachena uko munhu anofarira anoona nezvechokwadi cheruzivo rwapihwa mukuzivisa.
Online servicios Telemáticos SL inodzikisira chero mutoro zvine chekuita neruzivo rwuri kunze kwewebhu iyi, sezvo basa rezvisungo zvinoratidzika kuri kungozivisa Mushandisi nezve kuvapo kwemamwe mashoko eruzivo pane imwe nyaya. Online servicios Telemáticos SL inosunungurwa kubva kune chero mutoro wekushanda kwakakodzera kwezvibatanidzwa zvakadaro, mhedzisiro yakawanikwa kuburikidza nekutaura kwakabatanidzirwa, chokwadi uye chokwadi chezviri mukati kana ruzivo runogona kuwanikwa, pamwe nekukuvara kunogona kutambudzika. iyo Mushandisi kuburikidza neruzivo rwunowanikwa pane yakabatana Webhu.
PaInternet Servicios Telemáticos SL haipe chero vimbiso uye haina basa, chero zvakadaro, kukuvadzwa kwerudzi rupi zvarwo kunogona kukonzerwa ne: • Kushaikwa kwekuwanikwa, kwekuchengetedza uye kushanda kwewebsite kana masevhisi nezviri mukati; • Kuvapo kwemavirusi, zvirongwa zvakaipa kana zvinokuvadza mune zvirimo; • Kuita zvisiri pamutemo, kushaya hanya, kubiridzira kana kupokana neChiziviso cheMutemo ichi; Kushaikwa kwemutemo, hunhu, kuvimbika, kubatsira uye kuwanikwa kwemasevhisi anopiwa nevechitatu uye akaitwa kuti awanikwe kune vashandisi vewebhusaiti. Iye mupi haana mutoro pasi pechero mamiriro ezvinhu ekukuvadzwa kunogona kubva mukushandiswa zvisiri pamutemo kana zvisina kunaka kwewebhusaiti ino.
Kazhinji, hukama pakati peandroidpop.com neVashandisi veayo telematic services, iripo pane ino webhusaiti, inoenderana nemitemo yeSpain nemasimba uye kuMatare eGranada.
Muchiitiko chekuti chero Mushandisi ane chero mibvunzo nezve ichi chiziviso chepamutemo kana chero chirevo pawebhu androidpop.com, unogona kuenda kuinfo (pa) contact.online androidpop.com inochengetera kodzero yekugadzirisa, chero nguva uye pasina kuzivisa kusati kwaitika, kuratidzwa uye kumisikidzwa kwewebhu androidpop.com seichi chiziviso chepamutemo.